एनआरएनभित्रको राजनीति : नाकको राजनीति सुरु भएकै हो त? -
२४ आश्विन २०७४, मंगलवार २१:२५ October 12, 2017 wwwmophasalLeaveaComment on एनआरएनभित्रको राजनीति : नाकको राजनीति सुरु भएकै हो त?
अबको केही बर्ष गैरआबासीय नेपाली संघको राजनीति नाकको वरीपरी घुम्ने सम्भावना छ’, दुवईमा भेट भएका एक एनआरएनकर्मीले पाक्तिकारसँग भनेका थिए । हाँसेर हल्का ढंगले आफ्नो चोर औंला नाक निर लगेर भनेको उनको यो भनाइले पक्कै केही अर्थ राख्दछ । उनले नाक भनेर अक्टोबर १४ देखि १६ तारिक सम्म काठमााडौमा हुन गईरहेको एनआरएनको सम्मेलनमा अबको नेतृत्व छनौटमा जातीय नाराले प्रभाब पार्ने साकेत गरेका थिए ।
तसर्थ यी यावत घटना परिघटनाहरुलाई केलाउँदा आगामी सम्मेलनमा भवन भट्टलाई सर्बसम्मतले अध्यक्ष बनाउँदै कुमार पन्त र जमुना घलेलाई उपाध्यक्ष बनाउने बिन्दुमा सहमती हुनसक्ने देखिन्छ । सम्मेलनले नेतृत्वको छनौटसँगै लाप्राक बस्ती र एनआरएन भवन निर्माण प्रोजेक्ट समय सीमा भित्र सम्पन्न गर्ने संकल्प गर्दै सिन्डिकेट सकिएको घोषणा गर्न सकिन्छ । यो भएको खण्डमा नाकको राजनीति सँगसँगै पैसाले भोट किनबेचको खेलमा पनि बिश्राम लाग्नेछ । यसले आगामी २ बर्ष एनआरएनलाई एक ढिक्का बनाउने छ भने अर्को कार्यकालमा काम र क्षमताको आधारमा नयाँ नेतृत्व चुन्न सकिने आधार तयार गर्नेछ । कान्तिपुरबाट साभार
बिरेन्द्रनगर च्यालेन्ज कपको क्वाटरफाइनलमा रत्न युथ क्लब
२५ फाल्गुन २०७२, मंगलवार १७:३७ March 8, 2016 wwwmophasal
३१ जेष्ठ २०७३, सोमबार १४:२३ June 13, 2016 wwwmophasal